Samsung jiri ọnọdụ Huawei mee ihe na nkwalite a | Gam akporosis
Samsung jiri ọnọdụ Huawei mee ihe na nkwalite a
Mgbapu nke United States nyere Huawei maka mmekọrịta na-enyo enyo na gọọmentị nke China, site na ya Google ewepụla ikikere niile iji sistemụ arụmọrụ gam akporo, na-akpata gị bibie ndị rụpụtara ya, na ihe niile a na-eme mgbe anyị ka na-eche ma ọ bụrụ Huawei nwere ohere ịzọpụta onwe ya. Lọ ọrụ dịka Intel, Microsoft na Fedex akwụsịla ọrụ ha na Huawei.
Samsung, n'aka nke ya, na-eji nsogbu a eme ihe nke onye na-ama ya ji aga. Companylọ ọrụ South Korea na-erite uru site na ọnọdụ ahụ dum, na oge a na ọ bụghị dị iche iche, dị ka ọ na ulo oru a ọrụ nkwado mara mma iji dọta ndị ọrụ ama ama Huawei.
Na nkowa, ndị ahịa Huawei ndị gbanwere ekwentị ha maka Samsung Galaxy S10 nke Samsung ga-enweta ego dị mkpa. Nke a dị irè naanị na Singapore. (Chọpụta: Cegha ọnwa atọ megide Huawei)
Ọrụ ndị agbanweta Huawei Mate 20 Pro Ha nwere ike nweta mbelata ego ruru dollar 755 Singapore (S $), nke ruru ihe dịka euro 490 ịgbanwe; ndị nke Huawei P20 Pro, ruru S $ 560 (~ 360 euro); ndị nke P20, ruru S $ 445 (~ 290 euro); ndị nke agbarịta 20, ruru S $ 545 (~ 350 euro); na ndị nke Nova 3i, ruru S $ 300 (~ euro 200).
Ọrụ nkwado ga-adịgide ruo Mee 31 na mba ahụ. Nke ahụ bụ, ọ ga-adị irè naanị ihe dị ka ụbọchị atọ ọzọ n'ebe ahụ. Ọ bụ nnabata nnabata sitere n'aka Samsung maka ndị ọrụ Huawei, dịka ọdịnihu nke nnukwu teknụzụ ndị China na-enweghị gam akporo amachaghị nke ọma, opekata mpe na ama egwuregwu.
Ọ ka ga-ahụ ma ụlọ ọrụ South Korea ga-ebupụta nkwalite yiri nke ahụ na mba ndị ọzọ., nke dị ka ọ ga - abụ ikpe ahụ, ebe ọ bụ na ọ bịara doo anya na ọ na - eme ihe niile enwere ike iji nweta ọnọdụ kachasị na ya iji wee gosipụta onwe ya dịka onye nrụpụta kachasị ama nke ụwa, aha ọ nwere jidere ruo oge ụfọdụ na ọkwado dị elu nke Huawei nwetara na ụlọ ọrụ ahụ yiri ya egwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Samsung jiri ọnọdụ Huawei mee ihe na nkwalite a
Talion bụ ọhụrụ egwuregwu GAMEVIL MMO na akpaaka ọgụ nke ị nwere ike ida onwe gị na ya nnukwu ụwa